माधवकुमार नेपाल समूहकै कारण चुनावमा जानुपरेको हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ « Salleri Khabar
१४ जेठ, काठमाडौं । यतिखेर मुलुक गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उभिरहेको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टको महामारीबाट मुलुक गुज्रिरहेको यस परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सिंगो राष्ट्र एक भएर उभिनुपर्ने जबर्जस्त परिस्थिति सिर्जना भएको छ । राज्यको ध्यान महामारी नियन्त्रण गरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित छ ।
यद्यपि जनताको स्वास्थ्यप्रति सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भई सामना गर्नुपर्ने बेला राजनीतिमा उतारचढाव देखिएका छन् । मुलुकले बेहोरिरहेको महामारी, दलहरुबीचको बेमेल, घोषित चुनावप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०७८ का अवसरमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसँगको विशेष अन्तर्वार्ताः
मन्त्री गुरुङः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यस छोटो अवधिमा हामी तीन तहको सरकारको निर्वाचन गर्न सफल भएका छौंँ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानून निर्माण गरेका छौंँ । संविधान निर्माण गरेपश्चात् दुुईतिहाइ नजीकको मत प्राप्त भयो । त्यो जनमतले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिने काम भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक व्यक्तित्व, नेपाली जनताप्रति गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
मन्त्री गुरुङः प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र अन्य केही साथीले जुुन गतिविधि गरिरहनुभएको छ त्यो सही राजनीतिक दिशा होइन । मुलुकले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशा पनि त्यो होइन । अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने पनि त्यो राजनीतिक बाटो होइन, उहाँहरु दिशाविहीन बनिरहनुुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङः म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जहाँसम्म आरोप प्रत्यारोपका कुरा छ, विपक्षी राजनीतिक दलले उठाएको विषयमा नेपाली नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा हामीले नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा धारा ७६ लाई हेर्नुपर्छ । धारा ७६ को सबै उपधारा कार्यान्वयन भएको छ । कुनै निष्क्रिय भएको छैन । सबै उपधाराको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ ।
धारा ७६ ९३० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले बताइरहेका छन् यसलाई कसरी लिने ?
विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेपछि उहाँले आफ्ना निम्ति होइन, अन्य राजनीतिक दलहरुका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति ढोका खोलिदिनुभएको हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुभयो । त्यही प्रस्तावमा जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दावी पेश गर्नुभयो, यसको अर्थ मार्गप्रशस्तलाई राजीनामाका रुपमा उहाँले स्वीकार गरेको होइन रु संविधानको भावनालाई स्वीकार गरेको होइन रु प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने, अनि त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने ?
गत वैशाख २७ गते विश्वासको मतकै क्रममा ७६ ९२० अनुसारको सरकार गठनका लागि तीन दिनका लागि समय दिँदा उहाँहरुले प्रस्ताव लिएर जान सक्नुभएन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुका बीचमा उहाँले बहुमत पुर्‍याउन सक्नुभएन । त्यसभन्दा अगाडि उहाँले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्नुभएन । सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिन सकेन । संसद् पुनःस्थापना भएको करीब साढे दुई महिना उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्नुभएन । समर्थन फिर्ता पनि लिन नसक्नु, यी सबै परिस्थितिले के देखाउँछ भने संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठन हुने छ । त्यसले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ भन्ने प्रष्ट नै थियो ।
मन्त्री गुरुङः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लाने वर्तमान सरकारको कुनै सोंच थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वासको मत दिएको भए, आफ्नै पार्टीका १२१ सांसदमध्ये २६ जना सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको भए, आज के संसद् विघटन हुन्थ्यो ?मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्थ्यो ? यो परिस्थितिको निर्माण कसले गर्‍यो ? अहिले उहाँहरु भन्नुहुन्छ, संविधान र संसद् बचाउनका निम्ति हामीले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हो ।
दिउँसै रात पार्ने रु स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउने, आफ्नै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्ने, अनि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने ? जसले पार्टी निर्णयको विरुद्धमा गएर क्रियाकलाप गर्छ, उसैले संविधान र संसद् बचाउने ? हाम्रै पार्टीका साथीहरुले आज जसरी राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले हामी कहाँ पुग्छौंँ ? मध्यावधिको बाटो लिन बाध्य बनाउने को ? जसले असंसदीय बाटो अँगालेको छ, उनीहरु नै आज त्यसको भागीदार हुन् ।
मन्त्री गुरुङः राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन भन्ने टिप्पणी सुनेर मलाई दुःख लाग्छ । सम्मानित संस्थाप्रति टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि म उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधाराका आधारमा दावी के कारणले पेश गर्नुभयो भनी सोध्न चाहन्छु । उहाँको प्रस्तावमा सही गर्ने एमालेका माधवकुमार नेपाल जसले जीवनभर विधि र पद्धतिको कुुरा गर्नुभयो, प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा सही गर्नु उहाँको विधि र पद्धतिअनुसार थियो कि थिएन ? संसदीय प्रणालीमा आफ्ना पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु कुन राजनीतिक मिसन थियो ? कि त उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गरेर समर्थन गर्नुपर्ने थियो ।
विश्वसनीय नदेखिएपछि यी दुवै प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूूबाट अस्वीकृत भएको हो । के त्यो संविधानसम्मत थिएन र ? अनि राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतो गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो भनेर राष्ट्रपतिज्यूप्रति आक्षेप लगाउन पाइन्छ ? राष्ट्रपतिप्रति गरिएका टीकाटिप्पणी, व्यवहार, भाषा–शैलीले हामीमा राजनीतिक संस्कार देखिएन । आफूले संविधान मिच्ने, अनि आरोप लगाउने रु संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति दलको मातहत हुन्छ । व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन, पार्टीको निर्देशन मान्न सांसद बाध्य हुन्छन् ।
मन्त्री गुरुङः ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने गर्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैनथ्यो तर अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई फोहारी खेल जस्तै बनाइएको छ । भावी पुस्तालाई राजनीतिमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने भइरहेको छ । वर्तमान सरकाले गरेका सबै चिज असंवैधानिक देख्ने, सरकारले बेठीक गर्‍यो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउने, अनि आफू सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा केही पनि नगर्ने ? अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ न, सांसद किनबेच, पजेरो काण्डसहित अन्य विकृति, विसंगति कसका पालामा भए ? प्रतिपक्षी दलका नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उहाँको प्रधानमन्त्री काललाई एक पटक फर्केर हेर्ने हो भने हामीले उहाँप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयले यो मुलुकलाई कता लैजान खोजेको थियो ?